मनोरञ्जन Archives - Page5of 13 - Dna Nepal
नेपाल आइडलका बिजेता बने रवी ओढ, पोखराका बिक्रम बराल दोश्रो बने ६ पुष २०७५, शुक्रबार १५:४३
पोखरा, पुस ६ । नेपाल आईडलको बिजेता धनगढीका रवी ओढले जितेका छन् । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको फाइनलमा ओढले उपाधी जितेका हुन् । प्रतियोगिताका फस्र्ट रनर अप पोखराका बिक्रम बराल बनेका छन् । यस्तै सेकेण्ट रनर अप सुमित पाठक र थर्ड रनर अप..
थाईल्याण्डमा धुम मच्चाउँदै मनिता देवकोटा, मिस युनिभर्सको टप १० मा परिन २ पुष २०७५, सोमबार ०२:४९
काठमाण्डौं, पुस २ । मिस युनिभर्स २०१८ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी मनिता देवकोटा टप १० मा पुगेकी छन् । थाइल्याण्डको बैंककमा भइरहेको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा देवकोटा यसअघि एसिया तथा अफ्रिका क्षेत्रका उत्कृष्ट पाँच प्रतिस्पर्धीमा पर्न सफल..
श्रृंखला खतिवडा भन्छिन्–पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्छु २९ मंसिर २०७५, शनिबार ०२:४२
काठमाण्डौं, मंसिर २९ । दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल अन्नपपूर्णको खचाखत वातावरणबीच श्रृंखला खतिवडासँग सोधियो, ‘अबको यात्रा के हुन्छ ?’ ‘देशकै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य छ’, चीनको सान्यामा १०९ सुन्दरीलाई पछि पार्दै ‘विश्व सुन्दरीको १२..
कास्कीका सिडि बिजय अधिकारीले जिते भ्वाईस अफ नेपालको उपाधी
पोखरा, मंसिर २९ । रियालिटी शो दि भ्वाइस अफ नेपालको उपाधी पोखराका सिडीविजय अधिकारीले जितेका छन् । कतारको दोहामा भएको फाइनलमा अधिकारीले विजेता बन्दै उपाधी हात पारे । दि भ्वाइस अफ नेपालको फाइनलमा सिडि बिजय अधिकारी, कुशल आचार्य, सप्तक द्रुतराज र..
विकृतिको घेरो तोड्ने नाटक ‘घेरो’ पोखरा थिएटरमा २४ मंसिर २०७५, सोमबार ०३:३४
पोखरा, मंसिर २४ । पोखरा थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा यतिबेला नयाँ शैलिको नाटक मञ्चन भैरहेको छ । वालन शैलिमा प्रश्तुत गरिएको नाटक घेरो लोक नाटक हो । हालसम्म नेपालमा यस्तो शैलिको नाटक खासै धेरै छैन । मञ्चन शैलिजस्तै नाटक घेरो धेरै हिसावले फरक छ ।..
अपारदर्शी मिस वर्ल्ड, श्रृंखलामाथि ‘अन्याय’ ! २३ मंसिर २०७५, आईतवार ११:०१
काठमाण्डौं, मंसिर २३ । मेक्सिकोकी सुन्दरी भानेसा पोन्स डे लियोनलाई ताज पर्हियाउँँदै चीनमा मिस वर्ल्ड २०१८ प्रतियोगिता शनिबार पटाक्षेप भयो । नेपालकी सुन्दरी श्रृंखला खतिवडा प्रतियोगितामा दुई महत्वपूर्ण अवार्ड जित्दै टप १२ सम्म पुगिन्..
पोखरा एक्स्पोमा नेपाल आइडलका फाइनलिष्ट विक्रम बरालले गाउने
पोखरा, मंसिर २३ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा नयाँबजारको प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित मेलामा शनिबार अवलोकनकर्ताको भीडभाड लाग्यो । मेला समापन हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा पोखराको पहिचान बनेको मेला भर्नेहरुको घुँइचो लागेको हो । शनिबार..
श्रृखला खतिवडा मिस वर्ल्डको टप १२ बाटै बाहिरिइन, त्यो मोड जसले अघि बढ्न दिएन श्रृंखलालाई २२ मंसिर २०७५, शनिबार १६:२०
पोखरा, मंसिर २२ । नेपालकी श्रृखला खतिवडा मिस वर्ल्डको टप १२ बाटै बाहिरिएकी छन् । उनी एसिया एण्ड ओसियानाबाट टप १२ मा पुगेकी थिइन् । उनीसँगै न्यूजिल्याण्डकी जेसिका टाइसन र थाइल्याण्डकी निकोलेन शीर्ष १२ मा पुगेकी थिइन् । यो पटक पाँच महादेशबाट टप..
मिस वर्ल्डको फाइनल आज, कस्तो छ श्रृंखलाको सम्भावना ?
पोखरा, मंसिर २२ । ‘मिस वल्र्ड २०१८’ को फाईनल आज हुँदैछ । मिस वर्ल्डका लागी नेपालबाट मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा प्रतिश्पर्धामा छिन् । उनको मिस वर्ल्डको यात्रालाई लिएर धेरैले धेरै हिसावबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् । श्रृंखलालाई जिताउन उनका बुवा..
सन्नी लियोनिको नेपाली फिल्ममा ‘हट’ डान्स (फोटोमा हेर्नुस्) २० मंसिर २०७५, बिहीबार १२:१७
एजेन्सी, मंसिर २० । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले नाचेको ’पासवर्ड’ सिनेमाका तस्विरहरू सार्वजनिक गरिएका छन् । निर्माणपक्षले ती तस्विर सार्वजनिक गरेको हो । सो गीतलाई लन्डनमा करिब दुई सय कोरसको साथमा खिचिएको निर्माण युनिटले जनाएको छ । गीत..